Ndị nrụpụta ESCO | China ESCO Ndị na -ebubata ya & ụlọ ọrụ
35S nọchiri anya ihe nkwụnye mgbatị bevel ịwụ maka igwe Esco3808-35
3808-35-35S nọchiri anya ihe nkwụnye mgbatị bevel ịwụ maka igwe Esco, ire ọkụ na Europe. Agba odo ma ọ bụ isi awọ, dịkwa mma maka PC200 na ZX200. Ezigbo mma na nkwa site na nrụpụta Aili. Aili nwere ihe karịrị 3000 nwere ike dochie maka ụdị ama ama ụwa niile maka ihe ndozi Excavator.
ụdị ezé ịwa excavator ịwụ V39SYL V39SHV ndụmọdụ ịwụ
V39SYL V39SHV V39VY /VYH V39T, ụdị V dị iche iche nke dochie maka igwe Esco. Ihe dị elu alloy steel dị ogologo, ndụ ọrụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma. Ọdịdị dị mma na akwụkwọ ikike ogologo, ụlọ ọrụ Aili nwere afọ 40 kemgbe 1980.
18/20PN & 18LK 18S 20S pin & mkpọchi maka mkpọchi ịwụ excavator na nkwụnye nkwụnye bọket. Agafere ọgwụgwọ okpomọkụ, ezi mma na ọrụ life.Aili rụpụta malitere mgbatị na ibe ya site na 1980.
V61SD V61RYL V61SYL V61RC V61TL onye na -egwuputa ihe na -echekwa ezé ịwụ
V61SD V61RYL V61SYL V61RC V61TL excavator akụkụ akụkụ ịwụ ezé, alloy ígwè ihe, mma mma, ogologo na -eyi ndụ, mma ntụkwasị obi. Aili rụpụtara kemgbe 1980, yana nnukwu ụlọ ọrụ 4.
V43SYL V43SHV V43SDX elu ezé ịwụ
V43SYL V43SHV V43SDX elu ezé ịwụ, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma.
V17 TYL TVY ezé ịwụ maka iji igwe ecavator
V17 TYL TVY ezé ịwụ maka iji igwe ecavator, ezé ịwụ nke pere mpe, ihe nchara alloy, ịdị mma, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma.
203-70-43150 30S Oke ntụtụ elu maka onye na-egwu ihe PC100 EX120 ESCO
30S 203-70-43150 ezé ịwụ maka PC100 EX120 ESCO, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo oge, ntụkwasị obi ka mma, na-eji ahịrị mmepụta seramiiki, ọdịdị mara mma nke ukwuu. Nrụpụta Jiangxi Aili kemgbe 1980, nwere olile anya ịbụ onye gị na ndị enyi ogologo oge.
25S 20X-70-23161 PC60 A60 rụpụtara Aili rụpụtara ezé ịwụ na bọket
25S top pin eze (20X-70-23161) nnọchi maka ESCO, PC60, alloy steel material, anụ kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma.
3807-30 30S Top pin Bevel bọket adatper nwere oghere 30mm
3807-30 30S Top pin Bevel bucket adatper nwere oghere 30mm, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo oge, ntụkwasị obi ka mma, na-eji ahịrị mmepụta akpaka zuru oke, oge nnyefe ngwa ngwa. Nrụpụta Jiangxi Aili kemgbe 1980, nwere olile anya ịbụ onye gị na ndị enyi ogologo oge.